Usebenzisa njani i-cream rinse? | Amadoda aQinisekileyo
La Coca ukhilimu o imeko Yimveliso yokhathalelo lweenwele engenakusetyenziswa ukugqitha, kuba ukuba uyayenza inokubangela inkwethu kwaye ngenxa yoko ilahleko yeenwele.
Amadoda ahlala eyisebenzisa le mveliso nge-inertia ngaphandle kokufumana uluvo lweempawu zayo okanye ukusetyenziswa kwayo ngokuchanekileyo. Ke ngoko, egameni lika Amadoda aQinisekileyo Nazi ezinye iingcebiso malunga nokusetyenziswa ngokuchanekileyo kwesixhobo sokulungisa imeko.
Kuya kufuneka ubeke isiqwenga esincinci malunga nobungakanani bengqekembe entendeni yesandla sakho. Emva koko usasaza kwaye usibeke kwisiqingatha seenwele. Sukufaka i-conditioner kulusu lwakho, kuba iyenza ibe namafutha kwaye ibangele ukuba inkwethu ivele, yenza iinwele zakho zome kwaye ziphalaze.
Emva kokuhlamba, susa ukhilimu ogqithisileyo ngetawuli, uqiniseke ukuba akukho mkhondo wekhrim kwizinwele zakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Usebenzisa njani i-cream rinse?
Unonophelo oluchanekileyo lobudoda
I-COOGI, iijezi zokucoca